Zụrụ Embeds YouTube - SoNuker
You nwetụla mgbe ị gara na weebụsaịtị ma ọ bụ blog nwere vidiyo YouTube gosipụtara na ya? Nke ahụ na-agbakwunye! Ọ bụrụ na ị video agbakwunyere nyeere (a na-nyeere ndabara), mgbe ahụ onye ọ bụla nwere ike embed gị YouTube video na ha na ebe nrụọrụ weebụ ma ọ bụ n'ime ha na-elekọta mmadụ media profaịlụ. Mgbe nke a mere, ọ dị mma! Nweta nkwalite vidio gị n’efu, n’enweghị nsogbu.
Mgbe vidiyo gị na-agbakwunyere na weebụsaịtị ndị ọzọ, ihe ole na ole na-eme:
Ebe nrụọrụ weebụ ndị ahụ nwere ike ịmepụta okporo ụzọ na vidiyo gị.
Google ghotara na vidiyo gi tinye na weebụsaịtị ndi ozo ma ya mere o nwekwuo "ikike".
The elu gị video si “Authority,” na elu YouTube na Google ga-ọkwado gị video n'ime search results.
The elu gị video si “ikike,” ka mgbe ha ga-egosipụta gị video na atụmatụ na-atụ aro Videos ngalaba.
Ihe a niile na - eduga ndị ahịa na ndị ọbịa na vidiyo gị, nke bụ ihe onye ọ bụla chọrọ!
Mgbe ị debere iwu gị, anyị ga-ewere vidiyo ị nyefere ma bido itinye ya na weebụsaịtị. Anyị na-amalite na-arụ ọrụ na iwu ọhụrụ n'ime 24-72 awa mgbe etinyechara ha. Mgbe ahụ, ọ ga-ewe izu ọzọ iji rụchaa nnyefe ahụ.
Ee na mba. Ọrụ a ga - enyere gị aka ịbawanye ọkwa YouTube na ọnụọgụ ahịa, mana ị ga - enwe ihe ịga nke ọma na - agbadata ọtụtụ ihe na nke a bụ 1 nke ihe ndị ahụ. Ihe ndị ọzọ iji melite ihe ịga nke ọma vidiyo gị gụnyere:
agbakwunyela na ụgbọ ibu gị.